I-flashlight ye-Tactical neholwa yayo - Liveolight.com
I-flashlight ye-Tactical neholwa yayo
I-1500 lumens iholele ukukhanya kwe-flashlight ehamba phambili nekhono lamandla
Imininingwane Esheshayo Indawo Yomsuka: Zhejiang, China (Ezwekazini) Igama Lobani: I-power lite eholele i-flashlight Inombolo yesibonelo: I-SFL-A176N amandla e-flashlight eholele igama lomkhiqizo Igama: i-power lite eholele i-flashlight Uhlobo lwebhethri: 3 * D ...
I-Aluminium 2AA Ibhetri I-CREE LED i-Flashlight ye-Projective ne-Penclip
♥ I-flashlight yokuphromotha ye-projective, namaphethini angazenzekelayo. ♥ Kunikwe amandla yi-2xAA amabhethri alkaline, ne-7 amahora wokugijima. ♥ Ipenclip ephakeme kakhulu, insimbi eyenziwe kanye nokucubungula kwe-electrophoretic, kufanelana nendlela ...
I-Pack ye-Battery E-Reconableable ye-Battery I-Pack ye-Rubberize Handle Extreme Bright Weather Resistance Ishaja se-Max Runtime Hambayo Led Camping Light
Ibhethri elingenakulinganiswa I-pack i-i-ion I-handle ye-rubberize Isikhathi esiphezulu sezulu sokumelana nokushayela ukushayela kwesikhala sokushayela kwe-Max isikhathi sokukhanya kwe-LED ♥ 1000 lumen i-SMD yekhamera ilanga ♥ 3.7V 4000mAh 18650 lithium ibhethri * 1 ♥ ...
I-IPX7 enganamanzi 2AAA Ibhetri CREE Flashlight nge-Penclip
♥ Usebenzisa i-CREE XP-G2 R5 LED, enezikhwama eziphezulu ezifika ku-80 lumens. ♥ Kunikwe amandla yi-2xAAA amabhethri alkaline, okuphezulu okukhipha kuze kufike kumahora we-2. ♥ okunamanzi ku ...
Ama-flashlights asebenzayo abonisa ifomu eliphumelelayo ngempela lokukhanyisa okuphathekayo, futhi amayunithi aphezulu wezinga eliphezulu asekude nakakhulu ukuthuthukiswa okukhulu ngaphezu kwezinhlobo zethu ezintathu zokuqala. Imiklamo yezobuciko ihlanganisa izinhlobo eziningi zezinhlobo ngenxa yemvelo ehlukahlukene kakhulu yezicelo zama-tactical, kodwa ezinye izici ezivamile zikhanya. Njengoba igama libonisa, lezi zibani zenzelwe izinhlelo zokusebenza ezinjenge-law kanye nokusetshenziswa kwezempi engqondweni, futhi ngenxa yalokho zakhiwa ngamakhamera aphezulu noma i-aircraft grade aluminium. Zivame ukungena ngamanzi futhi zenzelwe izingxenye zangaphakathi zezinga eliphezulu ukuze zimelane nomonakalo kusuka emithethweni kanye nokushaqeka. Izinguquko ziyizinkinobho zokuchofoza izinkinobho ezihloswe ukuvumela ukuhlinzekwa okukodwa kokukhanya ngesikhala ngesibhamu, futhi amalensi abe nomthelela ophezulu weglasi kanye ne-glass anti resistant noma iLexan. Ama-flashlight amaningi amathanga, afana nalawo avela kumagnalight, anikela ngamamodi asebenzayo ahlukene njengezindlela eziphansi, eziphezulu, nezokukhanya. Ama-bulk for flashlight ama-tactical ngokuvamile anezinga eliphakeme kunezingqimba ezivamile, nge-Xenon, Halogen, HID, ne-LED ama-bulb okuyizibani ezizikhethelayo. Amandla kulezi zibani zokukhanyisa ngokuvamile zihlinzekwa ngama-D-cell alkali-2, ama-D-cell akhokhwa kabusha, noma ama-battery we-NiMH noma i-Lithium Ion alayishwayo, okugcina esebenza kahle futhi ahlala isikhathi eside.
Ukukhishwa kwama-flashlight ahlukahlukene ahlukene kakhulu ngenxa yezinto eziningi ezihlanganisa uhlobo lwama-bulb, uhlobo lwebhethri kanye nokuluthwa kwe-bulb. Ezinye izigaba ezijwayelekile zokuphuma kwe-lumen zama-flashlight ama-tactical zimi kanje ngokulandela izinhlobo zezibani.
Ama-Xenon ama-20 - 40 Lumens
Ama-halogen: 25 - 150 Lumens
Ama-HID ama-amp: 200 - 3000 izibani
I-LED: 100 - 1000 Lumens
Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi kukhona ukuhlanganiswa phakathi kohlobo lwesibani, ukukhishwa kwe-lumen, nokuphila kwebhethri okusebenzayo. Ama-halogen nama-Xenon ama-lamp izibani eziyisisekelo ze-incandescent, futhi ngenxa yalokho zinokusebenza kahle nokuphila okufushane. Ama-Xenon ama-bulb asebenza kahle kakhulu futhi ngenxa yalokho kubangela ukuncipha okusheshayo emandleni ebhethri.
Ama-halogen ama-bulg anikeza ukusebenza kahle okwenyukayo kanye nokukhishwa kwe-lumen, kodwa ukwanda kwekhono kukhishwa umkhiqizo ophezulu, okuholela ekuphileni okubhebhethekile kwebhethri okufana neka-Xenon. Ama-Hid anikeza inani eliphakeme lokukhishwa kwe-lumen, isikhathi. Kuye ngohlobo lwe-flashlight nokucushwa kwebhethri, ama-flashlight e-HID angafaka kahle ngaphezu kwe-lumens eziyinkulungwane. Ama-HID ayinawo ama-filament futhi ayasebenza kakhulu; Nokho, badinga i-ballast futhi ngenxa yalokho bathatha imizuzwana embalwa ukuze bafinyelele amandla abo. Ukwengeza, ukukhishwa okwedlulele kwezibani ze-HID, nakuba kusebenza kahle, kubangele ukuba basuse amabhethri ngesilinganiso esisheshayo. Ama-flashlight amaningi we-HID azosebenza ngamahora we-1-2 ngaphambi kokudinga kabusha.
Izibani ze-LED zinikeza ibhalansi enkulu phakathi kokukhipha kwe-lumen nokuphila kwebhethri. Ama-flashlight ama-LED ajwayelekile ukukhiqiza phakathi kwe-100 ne-300 lumens futhi azogijima i-5 kumahora we-20 ngaphambi kokudinga ukuvuselelwa. Ama-LED amelela ukuphela okuphambene nokuguquguquka okukhulu kwesibani sesebani, nge-ultra high ekupheleni kwama-LED amayunithi avela ku-1000 lumens. Ukukhishwa kwe-LED kunomthelela obalulekile empilweni yebhethri. Amandla okukhanya okukhanya okuphansi okuphuma kwe-LED ku-90-180 ububanzi be-lumen ngokuvamile azogijima kuze kufike kumahora we-50 ngokushaja kwebhethri elilodwa. Izinguqulo ze-500-1000 ze-lumen ngokuvamile zihlala cishe amahora angu-2-5 ngaphambi kokudinga ukuvuselelwa. Ukuze usebenze jikelele, izibani ze-LED zinezibani ezisezingeni eliphezulu zisezintweni ezisezingeni elihle kakhulu, ngezibani ezizoqhubeka nokuphila kwe-flashlight, isikhathi esiphezulu sebhethri, nokukhishwa okuhle kakhulu kwe-lumen ne-lumen encane ehlehla kuze kube sekupheleni kokuphila kwebhethri.